Mirehareha Amin'ny Volony ve ny Vokatry ny Radioactive?
Science Physistry Chemistry
Ireo fitaovam-pandrefesana malaza
Ao amin'ny boky sy horonan-tsary, azonao atao ny milaza fa misy singa iray miely radioaktifa satria mamirapiratra. Ny filalaovana fimailo dia matetika lozabe maitso maitso maitso na indraindray mavo manga na mena. Moa ve tena singanina toy izany ny singa radioactive?
Ny valiny dia eny sy tsia. Voalohany, andeha hojerentsika ny ampahany 'no' amin'ny valinteny. Ny fahaverezan'ny radioakta dia mety mamokatra photon, izay maivana, fa ny fotony kosa dia tsy hita ao amin'ny ampahany hita maso.
Koa tsy misy ... singa radioaktifa tsy mamiratra amin'ny loko rehetra azonao jerena.
Etsy andaniny, misy singa radioactive izay manome hery amin'ny tontolon'ny fosafosana na ny fluorescent eo akaiky ary dia toa manjelatra. Raha hitanao plutonium, ohatra, dia mety ho lasa mamirapiratra mena izany. Nahoana? Ny plutonium dia mirehitra amin'ny fisian'ny oksizenina eo amin'ny rivotra, toy ny fandoroana afo.
Radium sy tritrimo isotope dia manome taratra izay manintona ny herinaratra amin'ny fluorescent or phoshorescent materials. Ny lelam-peo maivana ety ivelany dia avy amin'ny bosoa, matetika dopedina sulfida zinc. Na dia izany aza dia mety ho ampiasaina ny zavatra hafa mba hamokarana loko hafa.
Ohatra hafa amin'ny singa iray manjelatra dia radon. Mazava ho azy fa i Radon dia toy ny lasantsy, saingy rehefa mafana izy dia lasa fotsy mavomavo, ary mihalalina ny mena mena satria mihalalina eo ambanin'ny haavony .
Mitsimoka koa i Actinium. Actinium dia metaly radioaktika izay mamoaka hazavana manga mangina ao anaty efitra maizina.
Ny fanehoan-kevitra nokleary dia mety hamoaka gliokao. Ohatra miavaka ny lozika manga mifandraika amin'ny rafitra nokleary. Ny hazavana manga dia antsoina hoe taratra Cherenkov na taratra Cerenkov na indraindray ny vokatra Cherenkov . Ny lasantsy entana ateraky ny rivodoza dia mamakivaky haingana kokoa noho ny haavon'ny haavon'ny hazavana amin'ny alalan'ny medium.
Miely patrana ny molekiola ary miverina haingana any amin'ny toerany , mamoaka hazavana manga hita maso.
Tsy ny singa rehetra na ny fitaovam-pirazanana rehetra mamirapiratra ao anaty maizina, fa misy ohatra maromaro momba ny fitaovana izay hamirapiratra raha marina ny fepetra.
Ahoana ny Fitrandrahana Fiesta Radioactive?
Ny fomba fitsidihana ny toerana fitsaharan'ny Nevada
Endergonic vs Exergonic (miaraka amin'ny ohatra)
Strontium - Elements amin'ny Fireworks
Famaritana fika nokleary sy ohatra
Ohatra momba ny taratra
Nifanohitra amin'ny nokleary ny fikajika nokleary
Inona no atao hoe fahamendrehana?
Ahoana ny Fellt Lighting Works
Ny taona Gap
Ny Guter Punk na ny Hatsimoka Punk Movement
Loharano tena tsara ho an'ny tantaram-pianakaviana boky an-tserasera
Ahoana no fomba hilalao ny C Major Gord amin'ny guitare
Toro-lalana amin'ny teny frantsay: ny ampahan'ny vatana
Ny fomba hifindrana ambony amin'ny plyometrics
Cosmos: Odyssey Recaptition - Episode 101
Fihetsehana ho an'ny Sabata Ostara
Mahaiza Manana fahaiza-misaina ho an'ny fahombiazan'ny mpianatra
Tantara avy amin'ny Fanjakana Chola Inde
Ny biography of John W. Young
Tanjona ambaran'ny IEP: manampy ny ADHD mpianatra hifantoka
Ankilan'ny Ankizy Rariny Darlie Routier: Faharatsiana na Railroaded?
Biography of Physician Paul Dirac
Ahoana ny fanangonana ny taratasy fandroana rano
Nahoana isika no tsy antsointsika hoe Cro-Magnon indray?
Inona no lehibe sy madinika faha-7 ary ahoana no namoronana azy ireo?
Rhythm (Phonetics, poetika, ary fomba)
Olona tsy hita: Christina Morris
Ny tantaran'i Marty Robbins '"El Paso"
Ny Saga Fampiharana ny Formula 1 Qualifying
Inona no atao hoe famoronana? Misy siansa ve?
Ny sarimihetsika tsara indrindra sy ratsy indrindra momba ny hery manokana
Esao - Rahalahin'i Jakôba
Ny efitra fisakafoanana Pink in the Iowa Kinnick Stadium